Qafaal ciidamo uruurin ah oo laga billaabay Xamar iyo qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo wada in ay Itoobiya dagaal kala hortagaan. Ruunkinet 29/11/06
Midowga maxaakiimta ayaa dhawaan billaabay qafaal lagu uruurinaya dhalin yaro oo la doonaya in ay ka qeyb galaan jihaadka looga hortagaya ciidamda ajnabiga ah iyo kuwa gudaha oo la sheegay in ay dhawaan dagaal ku soo qaadi doonaan gobollada Shabeelada Hoose, Hiiraan iyo degmada Buur Hakaba.
Ciidamo ka tirsan midowga maxaakiinta ayaa ka wada magaalada Muqdisho uruurintan oo ay ku qafaalayaan dhalin yaro ayagoo marka qaarkood soo gelaya guryaha kadibna u kexeynaha xerooyin lagu taba baraya si ay u difaacaan dalka.
Dhanka kale, qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa ka wada magaalada Muqdisho abaabul ay ku doonayaan in ay ku aadaan gobollada dalka si ay ula dagaalaan ciidada shisheeye ee ay hoggaaminayaan kuwa Itoobiya.
Ciidamadan oo wada kulamo iyo isu soo bax ayaa si weyn u doonaya in ay ka qebqaataan dagaalka la filayo in ay dhawaan isaga horyimaadaan ciidadama Shisheeye iyo taageerayaasha midowga maxaakiimta oo nabad ka dhaliyay magaalada Muqdisho iyo meelo kale.